मासु कीमा बनाएको समावेश आधारित छन् जो, व्यञ्जन संख्या, यसको विविधता हिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई विभिन्न, meatballs, casseroles, meatballs zrazy, plăcintă। तर अक्सर तिनीहरूले मा प्राप्त छैन एक उत्सव तालिका कारण विभिन्न लागि। यो हटाइ सच्याउन, म तपाईंको व्यञ्जनहरु को एक साझेदारी र आलु रोल, एक सभ्य छुट्टी तालिका साथ सँगै खाना पकाउनु निर्णय गरेका छौं। पहिलो म मा सप्ताह मा पटक एक जोडी आफ्नो मित्रहरुलाई यो पकवान देखाए। तिनीहरूले अवशोषित के भोक संग देखेर, म यो पाकशाला कृति यसको ठाउँ लिन योग्य छ भनेर बुझे एक उत्सव मेनु। र कहिल्यै देखि जारी राखे। प्रत्येक समय म आफ्नो तयारीमा खेती गरिएको छ। यो खाना पकाउनु प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं विदेशी उत्पादनहरु किन्न आवश्यक छैन, सबै कुरा गर्न राम्रो सजिलो छ, तर एकै समयमा, यो हार्दिक र स्वादिष्ट पकवान छ।
आलु strudel कसरी खाना पकाउनु? यसको तयारी लागि हामी आवश्यक: 8-9 पीसी। आलु, ताजा दूध आधा ग्लास, को 700 ग्राम कुखुराको कलेजो, अण्डा, प्याज, वनस्पति तेल, नुन, मरिच र चोट crumbs। त्यसैले पहिलो हामी सफा र पानी मा आलु जोश छ। यो पकाएको हुन्छ, यो कसरी puree गर्न तातो Mash हुनुपर्छ। तातो दूध आधा कप पोख्नुहोस्, Mash। दुई थपियो गर्नुपर्छ कच्चा अन्डा, एक सानो नुन, वनस्पति तेल को चमचा को एक जोडी, त्यसपछि सबै कुरा राम्ररी मिश्रण। यो मसले आलु एक रोल को लागि एक wrapper छ। हामीले उहाँलाई एक सानो अडान दिनुहोस्।
र तिनीहरू भराई भन्दा लिइरहेका छन्। यस मामला मा, हामी ताजा चिकन कलेजो बाट तयार हुनेछ। चिकन livers, उनको साथ राम्रो धोए को 700 ग्राम लिन, हामी एक colander मा बदलाव र पानी ग्लास गर्न छोड्नुहोस्। तबसम्म हामी सुनको खैरो semicircles वनस्पति तेल मा5मध्यम प्याज सम्म तलना छ। तला प्याज गर्दा, हामी2बराबर भागमा प्रत्येक चिकन कलेजो कटौती गर्नुपर्छ। त्यसपछि, एक लगभग तयार बनाएको प्याज तला कलेजो प्रसार र निरन्तर तपाईं तत्परता यसलाई ल्याउन सम्म हलचल। ध्यान! जिगर neprozharennoe pinkish क्षेत्रमा हुँदैन, यो पूर्ण समाप्त गर्न मानिन्छ मात्र यस मामला मा, रगत छैन। समाप्त कलेजो को रंग - हल्का खैरो। पकाउने अन्त अघि पाँच मिनेट, हामी नुन मासु, मरिच संग मरिच संग मौसम, जीरा पाउडर को एक चिम्टी थप्नुहोस्। हाम्रो कीमा बनाएको एक पटक कलेजो, तला प्याज र तेल एक ब्लेंडर मा, हामी तुरुन्तै Peremel यो मिश्रण तल cooled छ।
200 डिग्री गरम ओवन उन्नत। त्यसपछि पाक, यो एक वनस्पति तेल संग एक ब्रश संग कोट गर्न आवश्यक छ पन्नी पाना, राख्दै तयार। थप पन्नी पानामा आलु रोल फैलाउन सुरु। मसले आलु को तिहाई एक आयत बनाउन र यसलाई समतल। आलु को माथि भराई र फैलाउन यो फेरि समतल। त्यसपछि, आलु बाँकी सम्पूर्ण संरचना गर्न निश्कर्षमा सफासँग टाढा tucked हुनुपर्छ। म तेल को पाम तेल, र त्यसपछि रोल्स गोलो आवारागर्दी ~ को फारम संलग्न छन्। हलचल भएको कचौरा एक कच्चा अन्डा को पहेंलो भाग, र यो मार्गदर्शन पहेंलो भाग हाम्रो रोल को सम्पूर्ण सतह कवर गर्नुपर्छ (यो प्रक्रिया सुनको खैरो को उपस्थिति योगदान) र त्यसपछि चोट पटाखे संग छिडकना अन्त गरेर।
तपाईं ओवन मा आलु roulade राख्नु अघि, उसलाई शीर्ष सतह टूट छैन निश्चित घायल केही ठाउँमा हुनुपर्छ। तिनीहरू एक दांत कोट्याउने सिन्का रूपमा पातलो छन् साथै यस काठको skewers लागि उपयुक्त। आधा एक घण्टा रोल पाक्नु। जब ओवन देखि आलु strudel बाहिर निकाल्न - यो एक्लै उहाँलाई छोड्न आवश्यक छ, जबकि लागि अनिवार्य छ, उहाँले, "उहाँले आफ्नो सास समातिए।" सुन्दर छ त्यसपछि, दुई spatulas प्रयोग गरेर, सुन्दर ठूलो प्लेट गर्न रोल हस्तान्तरण त्यसपछि ध्यानपूर्वक सुन्दर स्लाइस यसलाई काटे। घिउ संग सेवा गर्छन्। सीमित हुँदैन गर्न मात्र बिदाको लागि यो पकवान को तयारी गर्न - विश्वास मलाई, त्यहाँ एक midday बाहिर चिया वा खाने भन्दा tastier केही छ।
खैर, यो नुस्खा अन्य fillings प्रयोग गरेर अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ। स्वादिष्ट पालो र आलु रोल जडीबुटी संग मासु, मशरूम, अन्डा संग।
बीउ संग चेरी जाम कसरी खाना पकाउनु, र तिनीहरूलाई बिना
टमाटर र लसुन संग भुटेको zucchini कसरी खाना पकाउनु?
पाठो व्यञ्जन: विभिन्न राष्ट्रका व्यञ्जनहरु
गुप्तहरूले काटन र सिन्टपनाको आफ्नै हातले बनाएको थियो
"BBB" यार्न। समीक्षा र समीक्षा
ट्याब्लेट कम्प्युटर कसरी चयन गर्न
एक खेलौना र यसको सानो भागहरु कसरी सी गर्न: नाक गुडिया, आँखा, कपाल